primary-health-care – My Doctor
By editor|2020-03-16T03:50:19+00:00February 2nd, 2020|Categories: All Articles, အထွေထွေ, အထွေထွေရောဂါများ|
ချောင်းမဆိုးတဲ့ တီဘီ လူတော်တော်များများသိကြတာ တီဘီဆိုလျှင် အဆုတ်ရောင်တီဘီ၊ ချောင်းဆိုးမယ်၊ လူတွေကို ကူးစက်မယ်၊ တီဘီရောဂါဝေဒနာသည်ဆို ဝေးဝေးကရှောင်မယ်၊
By editor|2020-04-15T04:29:00+00:00February 2nd, 2020|Categories: All Articles, ကလေး ကျန်းမာရေး, မိခင်နှင့်ကလေးကျန်းမာရေ, အထွေထွေ, အထွေထွေရောဂါများ|
ဦးနှောက်မပါဘဲမွေးဖွားခြင်း ဦးနှောက်မပါဘဲ ကလေးမွေးဖွားခြင်းဆိုသည်မှာ မိခင်ဝမ်းအတွင်း ကလေးဖွံ့ဖြိုးစဉ်မှာ ကလေး၏ ဦးနှောက်၊ ဦးခေါင်းခွံရိုး၊ ဦးခေါင်းအရေပြား ကောင်းစွာ/ပြည့်စုံစွာမဖွံ့ဖြိုးလာခြင်းဖြစ်ပါသည်။
By editor|2020-05-27T04:23:10+00:00February 2nd, 2020|Categories: All Articles, ကူးစက်တတ်သောရောဂါများ, အထွေထွေ, အထွေထွေရောဂါများ|
ပင်မဆဲလ်သိမ်းဆည်းခြင်းဖြင့် သင့်ကလေးအတွက် ကောင်းကျိုးများ Stem Cells ဆိုတာ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပြောရရင် မူလအရင်းအမြစ်ဆဲလ်ဆိုပြီး ဘာသာပြန်လို့ရပါတယ်။ ကျတော်တို့ငယ်ငယ်တုန်းက
is it good for too much drinking water?
By editor|2020-03-25T08:36:13+00:00January 27th, 2020|Categories: All Articles, အထွေထွေ, အထွေထွေရောဂါများ|
ရေများများသောက်တိုင်းကောင်းသလား? လူခန္ဓာကိုယ်ဖွဲ့စည်းမှုရဲ့70%ကရေဓာတ်နဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ရေဓာတ်ကလူခန္ဓာကိုယ်အတွက်အရေး ကြီးဆုံးလိုအပ်ချက်ဖြစ်တဲ့အတွက်နေ့စဉ်ရေကိုများမျာသောက်ပေးသင့်ပါတယ်။တစ်နေ့ကိုလူကြီးတစ်ယောက်အနေနဲ့ရေ ၂ လီတာ (ရှစ်အောင်စ )သောက်သုံးသင့်တယ်လို့စာတမ်းတွေအရပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့ ဘယ်အရာမဆိုတန်ဆေးလွန်ဘေး ဆိုတာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်အတွက်
By editor|2020-04-15T13:16:11+00:00January 27th, 2020|Categories: All Articles, အထွေထွေ, အထွေထွေရောဂါများ|
*စားစရာလေးတွေနဲ့မျက်နှာပေါင်းတင်ကြမယ် အခုခေတ်မှာဆိုရင် အမျိုးသမီးပဲဖြစ်ဖြစ် အမျိုးသားဖြစ်ဖြစ် အတော်များများကမျက်နှာအသားရေလှပဖို့အတွက် ပေါင်း တင်ခြင်းတွေကိုပြုလုပ်လာကြပါတယ်။ပေါင်းတင်တဲ့အခါမှာ တစ်ချို့ကတော့ Spa တွေသွားပြီတင်ကြသလိုတစ်ချို့ကအိမ်မှာ
အေးမြသော ရာသီဥတုကြောင့် ရရှိလာနိုင်မယ့် ကျန်းမာရေးအကျိုး(၅)မျိုး (၁)ဦးနှောက်၏စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားစေခြင်း ပူပြင်းတဲ့ရာသီဥတုမှာဆိုရင် ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်ကိုလျော့ချဖို့အတွက် glucose ကိုလိုအပ်တာထက်ပိုပြီးအသုံးပြုရပါ တယ်။ထိုအခါမှာ